Iseluleko se-Semalt: I-Web Usetyenziso lweWebhu kunye neZiko lokuCoca
. Inani elikhulu lezahlulo lichithwa, kwaye idatha ichithwa imihla ngemihla. Ezinye iiprojekthi zenziwa nge software kunye nezixhobo ezininzi, ngelixa ezinye zingagqitywa ngesandla. Iprojekti elandelayo ayikho nje kuphela kodwa ikhululekile neendleko kwaye inika izibonelelo ezininzi kubasebenzisi bazo.
i-iMacros yongezwa kwiiphequluli zewebhu kwaye yenye yeprojekti epholile kunazo zonke kubaprogram nabangabinkqubo. Ikuvumela ukuba ubambe kwaye ubuyekeze imisebenzi yewebhu njengokuvavanya, ukukhuphela nokulayisha imifanekiso kunye nokubhala. Kwakwenza kube lula ukuba ungenise kwaye uthumele idatha usebenzisa iifayile ezihlukeneyo, iiCV kunye ne-XML kunye nezinye izixhobo. iMacros yenza imisebenzi ehambelana nokuhlolwa kwewebhu kunye nokukhwela.
I-PromptCloud yaziwa ngokubanzi kwi-web ye-web scraping , ukukhwabanisa kwewebhu kunye neenkonzo zokucima idatha. Kukhulu kumashishini asekhompyutheni kunye nokuqalisa, kwaye unokukhupha iitoni zedatha kuwe ngeelwimi ezahlukileyo kunye nakwiipulatifomu ezahlukeneyo. Isebenzisa ububanzi obuninzi bobuchwephesha ukwenza umsebenzi wakho ufeze kakuhle. Unokwazi ukwazisa ulwazi kwiiblogi, kumasayithi eendaba ezentlalo, iiwebhsayithi zokuphonononga, iifom ye-intanethi kunye neendawo zokuhamba.
4. I-Visual Web Ripper
I-Visual Web Ripper iyisofthiwe esetyenzisiweyo esetyenziselwa ukukhangela amawebhsayithi, ukuvuna idatha, nokukhupha umxholo osebenzayo ngokukhawuleza.Iyinye yezixhobo ezinamandla kunayo yonke. Izixhobo zokufumana iindaba, kukunika iziphumo ezilungileyo.Le sixhobo kwakhona ifumana idatha ukusuka kumaphepha ewebhu, kukunceda ukukhuphela ulwazi oluchanekileyo nolwaziweyo.
I-WebHarvy yinkqubo yokujonga ichonga ngokuzenzekelayo i-web patter eyahlukileyo ns uze uqokelele ulwazi olufanelekileyo. Ikhupha amanqaku aphindaphindiweyo kwakhona, kubandakanywa itekisi, imifanekiso, ii-imeyile kunye nee-URL. I-WebHarvy ikuvumela ukuba uchithe idatha kwiiwebhusayithi ezingaqhelekanga ukuba idatha idatha yazo.
6. UDarcy Ripper
UDarcy Ripper ngu-crawler we-web-based crawler kunye ne-data extractor. Oku kwaziwa ngokuba ngumsebenzisi-friendly, graphical interface kwaye ingasetyenziselwa ukulanda idatha ehlelwe kakuhle phakathi kwemizuzwana. I-Darcy Ripper ikuvumela ukuba usebenze nayiphi na i-URL yeefayili kunye nokulandelwa kweefayile kuwe kwiifom ezahlukeneyo.
7. I-Ubot Studio
I-Ubot Studio yenye yeyona ndlela ihamba phambili kunye neyoyikeka kakhulu yewebhu kunye neenkqubo zokukhutshwa komxholo. Iza kokubili kwiinguqulelo zamahhala kunye ezihlawulwayo kwaye isicelo esisekelwe kwiwebhu. Ubot Studio ivumela ukuba sakha izikripthi kwaye sigqibe iindidi zezenzo ezifana nokumbiwa kwedatha, ukuhlolwa kwewebhu, kunye nokuphathwa komxholo. Ungagcina iifayile zakho kwiziko lokugcina okanye ulayishe kwi disk yakho yinkcazelo ngaphakathi kwemizuzu embalwa.